နှာစေးနေကြတုန်းဘဲလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နှာစေးနေကြတုန်းဘဲလား?
Posted by gabaw on Jan 9, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
မှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်တွေကတော့ သိသိသာသာပြောင်းကုန်ပြီနော် ။ တစ်သက်လုံးကိုင်ရမယ့် ကဒ်လေးက ဈေးပေါပေါနဲ့လုပ်ပေးနေပြီး ။ တစ်နှစ် (၂)နှစ်လောက်ဘဲ သက်တမ်းရှိတဲ့( ခြင်လောက်တောင် သက်တမ်းမရှိတဲ့) ကညနက ထုတ်ပေး(တစာစာအော်ပြီး ပိုက်ဆံပေး)နေရတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် / ယာဉ်လိုင်စင်တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ကတော့ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ဓါတ်ငွေ့လို ဘာဖြစ်လို့ အထက်ဘဲတက်နေရတာလဲ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းရှင်းရမည်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲလို့ သိချင်လိုက်တာနော်။
Clean Government ကိုတော့ Painting လုပ်နေတဲ့ ဌာနဖြစ်နေပြီနော်။ ဦးငွေကိုင် လိုတော့ မြန်မာကျော်မှာပါ နာမည်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး(Outside) ကိုပြောတာပါဗျာ။
သူကြီးခင်ဗျာ ရွာသားတွေကိုလဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ။ အားလုံးအတွက်လိုလိုမယ်မယ်ပေါ့။။။။
View all posts by gabaw →
လာဘ်စားတာတွေက တော်တော်လျှော့လိုက်ပြီလို့ ပြောပေမယ့် စနစ်ဟောင်းတွေ အကင်းမသေသေးတာတော့ ရှိဦးမှာပဲ ကိုဂဘော်ရဲ့။ အကျင့်လုပ်ပေးခဲ့တာကိုး။ ဒါပေမယ့်လဲ လာဘ်စားသူတွေဘက်က ကြည့်တဲ့အခါ လစာနဲ့ပဲ မလောက်လို့လားပေါ့။ ဒါပေမယ့်လဲ အားလုံး မျှမျှတတ ဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် / ယာဉ်လိုင်စင်တွေရဲ့ တရားဝင်စရိတ်တက်တာလား.. အောက်စိုက်ပေးရတာတက်တာလား.. .သိချင်ပါတယ်..။
အင်း တရားဝင်နဲ့ အပြင်နဲ့တော့ နည်းနည်းကွာမယ်ထင်ပါတယ်။ ပွဲစားတွေကိုလည်း ခု ကြပ်မတ်နေတာ တွေ့ရတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်တော့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဈေးချပေးတော့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့ရှင်။
မှတ်ပုံတင်ကရိုးရိုးကဒ်။ ဟိုဟာကစမတ်ကဒ်။ အင်းဂလိပ်လိုခေါ်ရလို့ဈေးပိုကြီးတာဖြစ်မှာပေါ့။
ဒီနှစ် ကညန မှာ လိုင်စင်သွားလုပ်တာ တော်တော် အဆင်ပြေခဲ့တယ်။
ပွဲစားမလို၊ ကိုယ်တိုင်သွားတာ တရားဝင်ပေးရတာထက် ထမင်းတစ်ပွဲဖိုးလောက်ပဲ (တကယ့်ကို ထမင်းတစ်ပွဲဖိုးလောက်ပဲ) ပိုပေးရတယ်။
ဒါတောင် တောင်းတာမဟုတ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပေးနေကျမို့ ….
နေရာ အတော်များများ မှာ အကျင့်လေးတွေ မပျောက်ကြသေးဘူး…။ နှာစေးနေတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ခေါက်ရိုးကျိုးနေတာ ပြင်မရသေးပါဘူး….။
အမှန်ကလည်း မမ ပြောသလို မတောင်းပဲနဲ့ပေးနေကျမို့…. ဆိုတဲ့သူတွေလည်းများနေသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်… ယခုနောက်ပိုင်းမှာ သိပ်ပြီးတော့ ပေါ်တင်မတောင်းတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်…ဘာကြောင်းလည်းဆိုတော့… အမျိုးသမီးက မြေစရင်းရုံးမှာငွေသွားသွင်းတော့ အရင်လိုအရာရှိ စားပွဲပေါ်ရောက်ဖို့ဘာမှမပေးရပါဘူး…၀န်ထမ်းတွေကလည်း သူတို့လုပ်စရာရှိတာတွေ အဆင့်လိုက်လုပ်သွားပါတယ်…ဒါပေမယ့် စေတနာရှင်တွေက သူတို့ကို ၅၀၀၀ တန်တွေဟော်တစ်ရွက်ဟော်တစ်ရွက်နဲ့ပေးသွားလိုက်ကြတာ..အဲဒါကို သူတို့ခင်မျှာ အံဆွဲအတွင်းသို့မြန်မြန်သွင်းလိုက်ရပါတယ်တဲ့….အင်မတန်ပါးနှပ်လှတဲ့ ကျနော့်အမျိုးသမီးကလည်း အားကျမခံ သူတို့လိုပဲ ၅၀၀ တန်တွေကို စာအိတ်လေးနဲ့ထည့်ပြီး တစ်ယောက်တစ်အိတ်စီဝေခဲ့ပါတယ်….(၅)ယောက်ဆိုရင် ၂၅၀၀ ပဲကုန်ပါတယ်တဲ့…
ဟုတ်လို့လားကွယ်………ကြောင်လေး အထစ်ခံလိုက်ရတဲ့မြေဂရံကိစ္စ ဆက်လုပ်ဖို့
“လာဘ်စားတာတွေက တော်တော်လျှော့လိုက်ပြီလို့ ပြောပေမယ့် စနစ်ဟောင်းတွေ အကင်းမသေသေးတာတော့ ရှိဦးမှာပဲ ကိုဂဘော်ရဲ့။ အကျင့်လုပ်ပေးခဲ့တာကိုး။”
+ – × အစားလက္ခဏာကိုဘယ်လိုရိုက်ရပါ့………
နောက်ပိုင်း နဲနဲပြုပြင်လာတဲ့ အစိုးရဌာနတွေထဲမှာ
ထွေအုပ် လို့ခေါ်မယ့် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး အဆင့်ဆင့်ကတော့ လုံးဝ လုံးဝ မပါသေးပါဘူး။
အခုနောက်ပိုင်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကဖယ်သွားတော့ သူက အာဏာအရှိဆုံးလိုဖြစ်ပြီး
ပိုကျပ် – ပိုကောက်ကျစ်- ပိုအတောင်းအရမ်း ရဲတင်းလာပါတယ်။
ကိုအောင်ရေ ဗိုက်ထဲမှာ ပုဏားလေးများရှိနေတာလား လက်တွေ့မြင်တွေ့နေရလို့လား? မှန်တာမှ မှန်မှန်မှန်နဲ့တောင်နေသေးတယ်ဗျို့။ ပိုတောင်းလာတော့လဲ စာဆိုလေးကတော့ အလှူဒမြတိုက်ကြသူငှာ တွေအထက်ကပြောသလို ခေါက်ရိုးကျိုးနေလို့ရော၊ အကျင့်ပါနေသေးလို့ရောဆိုတော့ ”နှမျှောတသ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုလိုက်ပြီး လှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါဗျာ“ Thanks.